Ukuzigcina uQhelekileyo iiFreezer ezihanjiswa phakathi kwamafu e-COVID-19-NEWS-Square Technology Group Co, Ltd.
Ukuzibamba okuQhelekileyo okuKhuselweyo kuhanjiswe phakathi kwamafu e-COVID-19
on 15th NgoJuni 2020, ilori yokugqibela ikhonteyile yemka kwindawo yayo yokugcina, iThekhnoloji yeTeknoloji ihambise ngempumelelo ii-4 zokuqala ezingama-19 zokuzibamba kwiDachan Food (eTaiwan). Iifriza ezimbini zokuzigcina ezizibekeleyo zicwangciselwe ukuhanjiswa kwiiveki ezimbini ezizayo. Iifriza ezijikelezayo zokuzihambisa zinikezelwa ngeshedyuli ngaphandle kwempembelelo ye-COVID-XNUMX, enkosi kubasebenzi beTekhnoloji ye Square kunye neenzame zeenjineli.
Izikhenkcezisi ezijikelezayo zethekhnoloji yesikwere azifumaneki kakuhle kuphela kubaxumi baseTshayina, kodwa ziyaziwa nakwabathengi baphesheya. I-2018-2019, kuye kwafakwa ii-freezer ezijikelezayo ezininzi kwaye zisebenza ngokupheleleyo kwizityalo ezintathu zokulungisa zeqela le-CP Foods eThailand, oyena mprosesa mkhulu weenkukhu eAsia. Ukutya kwe-CP kwanelisekile ngumgangatho wezixhobo kubandakanya ucoceko, ukuthembeka, ulondolozo olulula, ukusebenza ngokulula kwe-HMI kunye nenkxaso yexesha elifanelekileyo kwezobuchwephesha.
Kude kube namhla, i-Square Technology ihambise ngaphezulu kwe-40-yokuzibamba kwesikhenkcezisi, ezisetyenziswa ngokubanzi kumashishini ahlukeneyo, ngakumbi kwiinkukhu, inyama, ukutya okulungeleyo, njl.
Okungakumbi malunga neQela leDachan:
Xa uHo-jan Han waseka iTai-Dong Mills, iprosesa encinci yeoyile yeoyile kunye neekeyiki, ngo-1957, wasungula umbono oqhubeka nokuqhuba umlandeli weTai-Dong wale mihla-iDaChan Great Wall Group.
Ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane, iDaChan Great Wall Group ilandele umbono wayo wokuba nguvulindlela ngokunyaniseka nangokuzithoba. Iqela lisebenza ngokuthe nkqo kwiinkqubo zeenkukhu ,umaleko,inkabi yehagu,kunye ne-aquaculture elawula ngokupheleleyo ukuzala, ukusasazeka, ukuveliswa kokutya, ukuxhelwa, kunye nokulungiswa kokugqibela. Eli qela likwakhula iiyunithi zeshishini leoyile kunye nomgubo kunye nokwanda ngokuzinzileyo kwicandelo le-F & B kunye nolawulo lwenyani. Namhlanje, iDaChan Great Wall Group isebenza ngamaqela amashishini amathandathu, kubandakanya neQela loShishino lokuTya kunye neFlour, i-Agri-Meat kunye neQela loShishino, iQela leShishini lokuTya eliQokelelweyo, iQela loShishino lweFoodservice, iQela leShishini laseMzantsi-mpuma weAsia, kunye neQela loShishino laseMpuma Asia.
Ngokuhambelana neenjongo zobuchule bommandla, iDaChan isebenza ngaphezulu kweenkxaso-mali ze-100 kwiimarike zayo ezinkulu eTaiwan, China, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar naseCambodia.